Imisebenzi - DataNumen
Uyemukelwa emsebenzini othokozisayo nobuciko, lapho kungabantu abenza umehluko.
At DataNumen, siyazi ukuthi impumelelo yethu ingumphumela wabasebenzi bethu abangakholeki — iqembu lochwepheshe abanethalente, abanogqozi olukhulu, abasebenza ndawonye ukuletha izixazululo zokuthola idatha ezisiza abantu lapho kwenzeka inhlekelele yedatha. Sithanda kakhulu esikwenzayo nokuthi sikwenzela bani, futhi ngalelo thando kuza injongo.
Njengeqembu, siyaqhubeka sifuna izindlela ezintsha nezintsha zokuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu futhi sisebenzise ibhizinisi lethu.
Umsebenzi wethu ulula: yenza imikhiqizo emihle esiza abantu ukuthi babuyise idatha yabo ngangokunokwenzeka. Indawo yethu yokusebenza ngokubambisana isigcina sigxile futhi sizinikele ngokuhlanganyela ekufezeni le njongo. DataNumenAmasiko amukela ukwehluka kwemibono, izindlela zokuphila, ukuqonda kobungcweti kanye nemibono yomuntu siqu. Siyaziqhenya ngalokho esikwenzayo futhi sihlala sifuna abantu abanentshisekelo yokusiza ekugcineni ibhizinisi lethu lichuma.
Unentshisekelo yokujoyina ithimba lethu? Buka imisebenzi yethu engezansi bese usebenza namuhla.
Layisha ukufakwa kuhlu okuningi